CCS Anjoma: tsy nitrangana loza intsony vokatry ny fanofanana aroloza | NewsMada
CCS Anjoma: tsy nitrangana loza intsony vokatry ny fanofanana aroloza
Telo taona ny fiaraha-miasan’ny centre culturel et social (CCS) ao Anjoma miaraka amin’ny orinasa Ambatovy amin’ny fandaharanasa Albi. Manana toerana fanofanana tanora momba ny éléctricité de bâtiment, éléctricité industrielle, menuiserie… ny foibe tantanan’ny fikambanan’ny frera avy amin’ny congrégation Saint Gabriel izay miahy ny madinika. Efatra amin’izao fotoana izao ny mpianatra avy amin’ny lalam-piofanana éléctricité industrielle voaray miasa ao amin’ny orinasan’Ambatovy, araka ny fanazavan’ny frera Rafanomezantsoa Ignace. Efa nanao fianarana asa tany Ambatovy izy ireo, teo aloha ary nandray anjara tamin’ny fifaninanana ka voaray. Ankoatra ny ao Ambatovy, efatra ny orinasa mandray ny mpianatra avy niofana tao amin’ny foibe. Ankoatra ny fandraisana mpiasa, tombony nentin’ny fiaraha-miasa ny fahazoan’ny foibe hazo efa tsy nampiasain’ny orinasa intsony ka hanaovan’ny mpiofana fizarana sy fampiharana. Mahavita fampiharana betsaka noho izany ny mpianatra ary afaka namokatra fitaovam-pianarana amin’ny vidiny mirary alefa amin’ny sekoly eo an-toerana ihany, hoy ny fanazavany ihany.
Nahazo fiofanana momba ny aroloza amin’ny toeram-panofanana sy fiasana ny foibe. Vokany, tsy nitrangana loza intsony tao anatin’ny toeram-piasana nanomboka ny taona 2016 raha mahatratra sivy isan-taona ny loza teo aloha.
39 isaky ny andiany ny mpianatra raisina ao amin’ny toeram-panofanan’ny CCS, maharitra roa taona ny fianarana. 10 000 Ar isam-bolana ny sarany takina. Omena isa ny mpianatra ary avadika ho vola ny isa. Kajina ny isa rehefa mifarana ny taom-pianarana ka havadika ho vola ividianana fitaovana omena ny mpianatra izany. Laharam-pahamehana ny fandraisana ny mpianatra kamboty.